Macalinka Liverpool Jurgen Klopp oo doonaya Xidiga PSG Kylian Mbappe
Home Horyaalka France Macalinka Liverpool Jurgen Klopp oo doonaya Xidiga PSG Kylian Mbappe
Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa lagu soo waramayaa inuu isha ku haya xidiga Paris Saint-Germain ‘Kylian Mbappe si uu u keeno Horyaalka England.
Mbappe, oo si weyn loogu tixgeliyo inuu yahay weeraryahankii ugu fiicnaa kubada cagta adduunka, kaliya wax ka yar 18 bilood ayaa ka harsan qandaraaskiisa uu kula joogo kooxda heysata horyaalka Faransiiska.
Real Madrid ayaa la sheegayaa inay ka go’an tahay inay la soo wareegto 21 jirkaan, laakiin warbixin dhowaan soo baxday ayaa sheegeysa in Liverpool ay si xoogan u baadi goobeyso ciyaaryahanka reer France.
Sida laga soo xigtay Sport , tababaraha Liverpool Klopp ayaa doonaya inuu la shaqeeyo ciyaaryahanka ku guuleystay Koobka Adduunka, waxaana uu si adag uga danbeeyaa inay kooxdiisu raadineyso adeegiisa.
Mbappe, oo lagu soo waramayo in lagu heli karo 161 milyan oo ginni xagaaga soo aadan, ayaa dhaliyay 7 gool, waxaana uu diiwaangaliyay 7 kale 8 kulan oo uu u saftay PSG xilli ciyaareedkan.
Dhanka kale, da ‘yarkii hore ee Monaco ayaa dhaliyay 97 gool wuxuuna caawiye ka ahaa 58 kale 132 kulan oo uu u ciyaaray kooxdiisa haatan tan iyo markii uu yimid, 2017.
Previous articleWeeraryahanka Liverpool Salah oo mar kale laga helay Xanuunka Corona
Next articleLuis Suarez oo seegi doona kulanka Barcelona sababo la xiriira natiijada baaritaanka coronavirus